Spotify Client maka Windows Mac Linux na iOS na Android t
Spotify pụta dị ka otu n'ime ndị kasị ọhụrụ ngwa enye music gụgharia na podcasting. Na ihe karịrị nde 30 songs, 60 nde ọrụ na propinquity na akụkọ na-emeghị ka Taylor Swift na Wallach, Spotify hapụrụ dịghị nkume unturned n'ịzụlite aha ya na aha. Na a nnọọ obere oge, ụlọ ọrụ setịpụrụ ọhụrụ benchmarks na ghọrọ ndị kasị ewu ewu music ngwa mgbe iTunes. Ma, dị ka ọ bụ sị, na ihe ike, na-abịa ọzọ ibu ọrụ. Onye ofufe isi nke Spotify e amụba exponentially na otú ndị na-atụ anya. Ná mmalite, Spotify bụ a web dabeere na ngwa ma enweghị desktọọpụ ma ọ bụ mobile ahịa. N'elu-alaghachi azụ elekere, anyị ga-ahụ na akụkọ ihe mere eme na-anọchi àmà eziokwu na ọ dịghị online-eweta ọrụ ghọrọ ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ na-enweghị a ala ngwa. N'ihi ya, na-eche na ọ dị mkpa ịtụle ihe atụ anya nke ọrụ, ụlọ ọrụ ulo oru ala ngwa maka nta ọ bụla na-ewu ewu sistemụ. Nke a nyeere Spotify ka ha ụkwụ ọzọ ike na ahịa. Ọzọkwa, UI nke ahịa adọ nnọọ akpịrị na e mmasị site ọrụ dị ka mma.
1. Client maka Mac OS
2. Ahịa n'ihi na Windows
3. Ahịa n'ihi na Linux
Download Spotify music free na TunesGo enweghị Spotify ahịa
Ịtụle iTunes dị ka ike na-ama, ụlọ ọrụ mbụ bu n'obi bụ ikwado ọrụ na ụfọdụ ala ngwa nke a pụrụ jere ozi dị ka dochie nke iTunes ma si otú Spotify ahịa n'ihi na Mac na oru. Otú ọ dị na mbụ nsụgharị nke Spotify ahịa abụghị ndị dị ka ihe ọma dị ka nke ugbu a, ma nkwaghari bụ iji dịkwuo ewu ewu na nke na ngwa na e ọma ekele na-akatọ dị ka mma. Native ngwa kwagara ọrụ si nchọgharị iji a raara onwe ya nye window, na nke ọ bụla ọzọ na taabụ ndị dị na nke a lekwasị-elekwasị anya na Spotify.
Usoro nke na-eweta na ahịa ka desktọọpụ e mere dị mfe na a amamiihe igodo. Ọrụ dị nnọọ mkpa ka gara, https://www.spotify.com/int/download/mac/ https://www.spotify.com/int/download/mac/. Ka anya dị ka peeji emepe, ndị installer n'ihi na ọtụtụ na-adịbeghị anya version nke Spotify amalite nbudata. Ole na ole ọzọ clicks, onye ọrụ nwere ike mfe ịhụ Spotify-arụ ọrụ na ya na desktọọpụ ihuenyo.
The ahịa ndị dakọtara na niile nsụgharị nke Mac OS, gụnyere Odum, Yosemite ma na 2012, ụlọ ọrụ na pụọ ​​nkwado maka version mbụ karịa 10.5.
2. Client maka Windows
Nke abụọ kasị jiri kpọrọ sistemụ mgbe Mac bụ Windows. -Jidere uche nke Windows ọrụ, Spotify chụọ n'ọrụ ya ahịa n'ihi na niile nsụgharị nke Windows (XP, Vista, 7). Dị ka Windows ọrụ na-adịghị enwe ihe ọ bụla music gụgharia ngwa dị ka iTunes, Spotify emeghị ihu ukwuu nsogbu guzosie ike onwe ya n'etiti ha. The mfe ibudata ma wụnye ala ahịa nke Spotify e nabatara Windows ọrụ. Ọzọkwa, site n'idebe ahịa free, Spotify jikọọ a nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ.
Iji nweta a Spotify ahịa n'ihi na Windows, otu mkpa na-agbaso otu nzọụkwụ, dị ka nke Mac. Gaa Leta https://www.spotify.com/int/download/windows/, na ibudata na installer. N'elu ekpede ya, na ahịa ga-abụ ihe ngwa nke na akụrụngwa gị. Desktọọpụ ahịa dị maka niile nsụgharị nke Windows gụnyere Windows 8. Otú ọ dị ndị ala ngwa nke Spotify bụ maka Windows 8 ie otu cant ịhụ na ọ na Windows ụlọ ahịa.
3. Client maka Linux
Spotify emeghị ka ọ bụla raara onwe ya nye ahịa n'ihi na Linux, ma ọ bụla ahịa nke Windows ike ga-eji na Linux site Wine. Na mfe okwu, Wine pụrụ ịghọta dị ka ihe emulator (ezie Wine anọchi Wine abụghị ihe emulator). Ọ na-enye a ndakọrịta oyi akwa ime ka Windows ngwa-agba ọsọ na Linux. Dị ka Linux, Wine bụkwa na-emeghe isi mmekọ.
Iji mee ka a ike adịgide n'elu ahịa, otu ga na-elekọta aka ẹkenịmde ngwaọrụ. Spotify nọ otu ihe ahụ na uche me ahịa n'ihi na niile mobile sistemụ viz. Android, Windows, Black Berry, iOS wdg The ala ngwa nke Spotify n'ihi na ndị a ịwa usoro dị na ha na nwoke ahịa (eg. Play Store, App World wdg) na-free download. Site June 2012, Spotify mere ka music nkwanye free maka iPad na iPhone. Ọzọkwa, Spotify kwekwara ọzọ ike ọzọ ahịa (eg. Despotify) na mepụtara nkwado maka ha.
Ndị a niile ahịa ịgụnye rịọrọ ọrụ na aided ka ịtụkwasị obi nke Spotify.
> Resource> Spotify> Spotify Client maka Windows Mac Linux na iOS na Android